ANU Myanmar Research Centre Statement - Myanmar Research Centre - ANU
Home » News and Events » ANU Myanmar Research Centre Statement
ANU Myanmar Research Centre Statement
Since its February 1, 2021 coup, the army in Myanmar has encountered massive nationwide resistance. Rallies have been onascale not seen since 1988. Demonstrators, and those participating in other kinds of civil disobedience, have been peacefully calling for the military council to step down, release all its captives, and allow the elected legislature to sit. In recent days, they have been met with gunfire.
As academic specialists, post-doctoral fellows, research students and professional staff working on Myanmar at the Australian National University, we condemn the army’s use of arms to suppress the rallies, and in particular, its use of live ammunition to kill and grievously injure demonstrators.
To our friends and associates in Myanmar, and to ANU alumni there who are struggling against renewed dictatorship, we extend our solidarity. We join with you and with others around the world in demanding that the military stop the killings; release all captives, including our colleague Professor Sean Turnell, and restore civilian rule.
ANU Myanmar Research Centre board,9March 2021
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြသူများအား သတ်ဖြတ်နေမှုများအပေါ် သြစတေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ရှိ Myanmar Research Centre မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားသော ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၂၁ မှ စ၍ မြန်မာစစ်တပ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြီးမားသော ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများကို ကြုံတွေ့နေရသည်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ယခုကဲ့သို့ များပြားသော ချီတက်ဆန္ဒပြမှုအတိုင်းအတာအား ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်မြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆန္ဒပြသူများနှင့် civil disobedience ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်နေကြသော သူများသည် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမှုအား ရပ်တန့်ရန်၊ ဖမ်းဆီးထားသူများအား ပြန်လွတ်ပေးရန်၊ ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား အသိအမှတ်ပြုရန်တို့ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်တွင် ၎င်းတို့အား ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုများရှိလာပါသည်။ သြစတေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအထူးပြု လေ့လာနေကြသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဘွဲ့လွန်ပါရဂူ သုတေသီများ၊ သုတေသန ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် စစ်တပ်မှ ဆန္ဒပြနေသူများအား လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်ခြင်း အထူးသဖြင့် ကျည်အစစ်များအသုံးပြု၍ သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် အပြင်းအထန် နာကျည်စေခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချပါသည်။ အသစ်တဖန်ပေါ်ပေါက်လာသော စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆွေများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ANU ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ရပ်တည်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်မှ သတ်ဖြတ်မှုများရပ်တန့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပါမောက္ခ Sean Turnell အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူများ အားလုံးကိုလွှတ်ပေးရန်၊ အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် တောင်းဆိုနေကြသော သင်တို့အပါအဝင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိသူများအားလုံးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အတူတကွရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
**Further reading and links:**
ANU Myanmar Research Centre’s first statement on the coup: https://myanmar.anu.edu.au/events/news/326/statement-anu-myanmar-researc...
Statement on the Open Letter by Australian academics for Sean Turnell: https://myanmar.anu.edu.au/events/news/328/mrc-statement-sean-turnell
Direct link to the Open Letter: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQq7d2IyPkkfrk8y2vjRa1m9qlZ9JF...
Stay informed at New Mandala: https://www.newmandala.org/category/myanmar/